Indhofiiqida Laascaanood - BBC News Somali
23 Juunyo 2010
Image caption Dr Axmed Maxamuud Maxamed oo samaynaya qaliinka indhaha
Hay'adda Manhal ayaa soo gabagabaysay mashruuc isugu jira dawaynta iyo qalliinka indhaha oo ay ka faa'idaysteen dad fara badan oo ku dhaqan degmooyinka gobolka Sanaag iyadoo isla maantana ay hay'addu mashruuc kaas la mid ah ay ka billowday magaalada Laascaanood oo maanta laga furay isbital ay hay'addu leedahay.
Weriyaha BBCda Axmed M.Cali ayaa arrimahaas ka waraystay Dr. Maxamuud Axmed Maxamed (Shiine) oo ah isku-dubbaridaha mashruuca islamarkaasna qayb ka ah dhakhaatiirta qalliinka indhaha,
Dr. Shiine wuxuu sheegay in mashruucan laga hirgeliyay magaalooyinka Ceerigaabo, Badhan iyo Xiingalool oo dhamaantood ka wada tirsan gobolka Sanaag ayna ka faa'ideysteen dad ay tiradoodu gaarayso 1500 oo isugu jiray qalliin, dawayn iyo talooyin la siiyay dadkii la eegay qaarkood.
Sida uu sheegay dhakhtarku wuxuu tilmaamay in dadka la qalay ay gaaryaan 250 qof wuxuna intaas ku daray in mashruucan markii labaad laga fuliyay magaalada Badhan laakiin magaalada Xiingalool ay tahay markii ugu horraysay ee laga sameeyay mashruucan indhaha lagu dawaynayo.
Isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan cudurada ugu badan ee dadka laga daaweeyay, ama laga qalay wuxuu sheegay Dr.Shiine in cudurka ugu badan uu yahay ''Kataraga'' oo uu ku sheegay ''Caad'' indhaha daboola kaas oo sida uu sheegay ku dhaca dadka waawayn, inkastoo ay jiraan dad dhallinyaro ah oo u ku dhici karo ama carruurta qaarkood ay ku dhashaan.
Dr.Shiine wuxuu sheegay in mashruucan uusan ku koobnayn oo keliya indhaha ee ay weheliyaan hawlo caafimaad, oo la xiriira cudurrada guud iyo kuwa haweenka ku dhaca oo dawayn iyo qalliin isugu jira ayna ka qaybgalayaan dhakhaatiir fara badan.
Barnaamijka cudurrada guud iyo kuwa haweenka ayuu sheegay in gobollada Puntland laga samayn doono, iyo meelo kale oo ka mid ah koofurta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo Marka.
Mashruuc kale oo indhaha lagu dawaynayo ayuu sheegay in isla maanta uu ka billowday magaalada Laascaanood, halkaas oo isla maanta laga furay isbital wayn oo ay leedahay hay'adda Manhal oo iyadu gacanta ku haysa dhamaan mashaariicdan.